1 Ahene 13 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Ahene 13:1-34
13 Bere a Yeroboam gyina afɔremuka+ no ho rehyew afɔrebɔde+ no, Onyankopɔn nipa+ bi nam Yehowa asɛm+ so fi Yuda baa Betel. 2 Ɛnna ɔnam Yehowa asɛm so teɛɛm kyerɛɛ afɔremuka no sɛ: “O afɔremuka, afɔremuka, nea Yehowa aka ni, ‘Hwɛ! Wɔbɛwo ɔbabarima Dawid fie, na wɔbɛfrɛ no Yosia!+ Na ɔde sorɔnsorɔmmea asɔfo a wɔbɔ wo so afɔre no bɛbɔ afɔre wɔ wo so, na ɔbɛhyew nnipa nnompe wɔ wo so.’”+ 3 Na ɔmaa sɛnkyerɛnne+ saa da no sɛ: “Sɛnkyerɛnne a Yehowa aka sɛ ebesi ni: Hwɛ! Afɔremuka no mu bɛpae, na nsõ* a ɛwɔ so no abɔ apete.” 4 Bere a ɔhene tee nokware Nyankopɔn nipa no asɛm a ɔka tiaa afɔremuka a ɛwɔ Betel no, ntɛm ara na Yeroboam yii ne nsa fii afɔremuka no so teɛɛ ne nsa kae sɛ: “Monkyere no!”+ Ɛhɔ ara, ne nsa a ɔde kyerɛɛ no so no senee, na wantumi anka anto ne ho.+ 5 Na afɔremuka no mu paee, na nsõ a ɛwɔ afɔremuka no so bɔ petee sɛnea sɛnkyerɛnne a nokware Nyankopɔn nipa no nam Yehowa asɛm so kae no te.+ 6 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ nokware Nyankopɔn nipa no sɛ: “Mesrɛ wo, pa Yehowa wo Nyankopɔn no kyɛw ma me, na bɔ mpae ma me na me nsa no nyɛ yiye.”+ Na nokware Nyankopɔn nipa no paa Yehowa kyɛw,+ na ɔhene nsa no yɛɛ yiye, na ɛyɛɛ sɛnea ɛte kan no.+ 7 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ nokware Nyankopɔn nipa no sɛ: “Ma yɛnkɔ fie na kodidi,+ na menkyɛ wo ade.”+ 8 Nanso nokware Nyankopɔn nipa no ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Sɛ wode wo fie fã+ mpo ma me a, me ne wo renkɔ,+ na merennidi na merennom nsu wɔ ha. 9 Efisɛ saa na wɔnam Yehowa asɛm so hyɛɛ me sɛ, ‘Nnidi,+ na nnom nsu, na ɔkwan a wobɛfa so akɔ no, nsan mfa so mma.’” 10 Enti osiim faa ɔkwan foforo so na wamfa ɔkwan a ɔnam so baa Betel no so. 11 Ná odiyifo akwakoraa+ bi te Betel, na ne mma kɔkaa nea nokware Nyankopɔn nipa no yɛe wɔ Betel saa da no nyinaa kyerɛɛ no, na nsɛm a ɔka kyerɛɛ ɔhene no nso, wɔka kyerɛɛ wɔn papa. 12 Ɛnna wɔn papa bisaa wɔn sɛ: “Ɛhe na ɔfa kɔe?” Na ne mma no kyerɛɛ no ɔkwan a nokware Nyankopɔn nipa a ofi Yuda bae no faa so kɔe. 13 Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne mma no sɛ: “Monhyehyɛ afurum no mma me.” Enti wɔhyehyɛɛ afurum+ no maa no, na ɔtenaa so kɔe. 14 Otiw nokware Nyankopɔn nipa no kɔtoo no sɛ ɔte dua kɛse no ase.+ Ɛnna obisaa no sɛ: “Wone nokware Nyankopɔn nipa a ofi Yuda bae no?”+ Na obuae sɛ: “Ɛyɛ me.” 15 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ma yɛnkɔ fie na kodidi.” 16 Nanso ɔkae sɛ: “Merentumi ne wo nsan nkɔ, na merentumi ne wo nkɔ fie, na merentumi ne wo nnidi nnom nsu wɔ ha.+ 17 Efisɛ saa na wɔnam Yehowa asɛm so hyɛɛ me+ sɛ, ‘Nnidi, na nnom nsu wɔ hɔ. Ɔkwan a wobɛfa so akɔ no, nsan mfa so mma.’”+ 18 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Me nso meyɛ odiyifo te sɛ wo ara, na ɔbɔfo+ bi nam Yehowa asɛm so aka akyerɛ me sɛ, ‘Ma ɔnsan ne wo mmra wo fie na ommedidi na ɔnnom nsu.’” (Ɔdaadaa no.)+ 19 Enti ɔsan ne no kɔe sɛ ɔrekodidi na wanom nsu wɔ ne fie.+ 20 Na ɛbae sɛ wɔte pon ho no, Yehowa asɛm+ baa odiyifo a ɔkɔsan no bae no nkyɛn; 21 na ɔteɛɛm frɛɛ nokware Nyankopɔn nipa a ofi Yuda bae no ka kyerɛɛ no sɛ: “Nea Yehowa aka ni, ‘Sɛ́ woatew Yehowa ahyɛde so atua+ na woanni mmara nsɛm a Yehowa wo Nyankopɔn de maa wo so,+ 22 na woasan w’akyi akodidi na woanom nsu wɔ beae a ɔka kyerɛɛ wo sɛ: “Nnidi, na nnom nsu wɔ hɔ,” no nti, wo funu renkɔ w’agyanom amusiei.’”+ 23 Ɛbae sɛ odidi nom wiei no, ntɛm ara na ɔhyehyɛɛ afurum maa no, kyerɛ sɛ, odiyifo a ɔde no san bae no. 24 Enti osiim kɔe. Akyiri yi gyata+ tow hyɛɛ no so wɔ kwan so kum no,+ na ɔtow ne funu too kwan no mu. Ná afurum no gyina ho, na gyata no nso gyina funu no ho. 25 Na nkurɔfo bi betwaam na wohuu funu no sɛ ɛda kwan no mu na gyata no gyina funu no ho. Enti wɔbɛbɔɔ amanneɛ wɔ odiyifo akwakoraa no kurom hɔ. 26 Bere a odiyifo a ɔde no san fi ɔkwan no so bae no tee asɛm no, ɛhɔ ara na ɔkae sɛ: “Ɛyɛ nokware Nyankopɔn nipa a ɔtew Yehowa ahyɛde so atua no;+ ɛno nti na Yehowa de no maa gyata sɛ ɔntow nhyɛ no so nkum no sɛnea Yehowa asɛm a ɔka kyerɛɛ no no te.”+ 27 Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne mma no sɛ: “Monhyehyɛ afurum no mma me.” Na wɔhyehyɛ maa no.+ 28 Ɛnna osiim kɔe na ɔkɔtoo ne funu no sɛ ɛda ɔkwan no mu, na afurum no ne gyata no gyinagyina funu no ho. Ná gyata no nwee funu no, na onkum afurum no nso.+ 29 Na odiyifo no maa nokware Nyankopɔn nipa no funu so de too afurum no so, na ɔsan de no bae. Enti odiyifo akwakoraa no de no baa ne kurom sɛ ɔrebesu no na wasie no. 30 Na ɔde ne funu no bɛtoo n’ankasa amusiei, na wosuu no+ sɛ: “Due, me nua!” 31 Osiee no wiei no, ɔka kyerɛɛ ne mma no sɛ: “Sɛ miwu a munsie me amusiei a wosiee nokware Nyankopɔn nipa no. Ne nnompe ho na momfa me nnompe ngu.+ 32 Na nea ɔnam Yehowa asɛm so ka tiaa afɔremuka+ a ɛwɔ Betel ne sorɔnsorɔmmea afie+ a ɛwowɔ Samaria nkurow mu+ no, ne nyinaa bɛba mu.”+ 33 Asɛm yi akyi no, Yeroboam ansan amfi ne kwammɔne ho, na mmom ɔsan de ɔmanfo no biara kɛkɛ yeyɛɛ asɔfo+ maa sorɔnsorɔmmea no. Obiara a n’ani gye ho no, ɔmaa no tumi,+ na ɔkae sɛ: “Ma ɔno nso nyɛ sorɔnsorɔmmea sɔfo.” 34 Na eyi bɛyɛɛ Yeroboam fie bɔne+ ne ade a ɛbɛma wɔapopa wɔn na wɔatɔre wɔn ase afi asase so.+
^ Hwɛ Ex 27:3, ase hɔ asɛm.
1 Ahene 13